समुद्री सतहको वृद्धि बढ्दो र अधिक गतिशील छ | नेटवर्क मौसम विज्ञान
समुद्री सतहको वृद्धि बढ्दो र अधिक गतिशील छ
अन्य अवसरहरूमा उल्लेख गरिएझैं समुद्रको सतह बिस्तारै वा अलि बढ्नेछ भने समय बढ्दै जाँदा। यदि हरितगृह ग्यासहरूको सrations्द्रता यस्तै जारी रह्यो भने, ग्रहको तापक्रमको साथै समुद्री सतहको वृद्धि तीव्र र द्रुत हुनेछ।
एउटा अध्ययनले समयको साथ समुद्री सतहको विकासको विश्लेषण गरेको छ र यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि २०१ 2014 मा यो १ 50 1993 in भन्दा XNUMX०% छिटो बढेको छ। कुन कारणले समुद्रको सतह यति चाँडो बढ्यो?
1 मेल्टिंग ध्रुवीय बरफ टोपी
2 समुद्री सतह वृद्धि प्रमाण
3 समुद्री सतह बृद्धि मापनका लागि विधिहरू
मेल्टिंग ध्रुवीय बरफ टोपी
महासागरहरूको स्तर छिटो र छिटो बढ्दैछ। थप रूपमा, त्यहाँ क्षेत्रहरू छन् जुन आँधीबेहरी र उष्णकटिबंधीय आँधीबेहरी जस्ता अत्यधिक मौसमविद्को घटनाको कारणले समुद्री पानी भित्रबाट धकेल्छ र धेरै समुद्री तटवर्ती इलाकाहरूलाई बसोबास गर्दैन।
अध्ययनले समुद्रको सतह झन् झन् चाँडो बढ्ने कारण पत्ता लगाएको छ। यो ग्रीनल्याण्ड बरफ टोपी को पग्लने बारे हो। ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनका कारण ग्लोबल औसत तापमानमा मानवीय क्रियाकलापको कारण वृद्धि भएको छ यसले समुद्री सतहको वृद्धिको गतिमा २ of% वृद्धि गराइरहेको छ। २० बर्ष पहिले, ग्रीनल्याण्डको पग्लनेले मात्र समुद्री सतह%% मा वृद्धि भएको हो।
यसले हामीलाई प्राकृतिक घटनाहरू हुने गतिमा प्रतिबिम्बित गर्न सक्दछ। हामी यस तथ्यको बारेमा कुरा गर्दैछौं कि केवल २१ बर्षमा, ग्रीनल्यान्डको पग्लने गति द्रुत हुँदै गइरहेको छ। यो अनुमान गरिएको छ कि २० 21० सम्ममा उत्तर ध्रुवमा ग्रीष्म longerतुमा हिउँ हुने छैन। यसको मतलब संसारभरि लाखौं समुद्री तटवर्ती शहरहरू बेपत्ता हुनु भन्न सकिन्छ।
२०१ 2014 मा, महासागरहरूको स्तर बढ्यो करीव 3,3 मिमी / वर्ष बनाम २.२ मिमी / वर्ष १ 2,2 1993,, नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नलमा अनुसन्धानकर्ताहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस्। कामबाट यी निष्कर्षहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन् किनकि उनीहरूले भविष्यमा समुद्री सतहको वृद्धिको लागि एकदम सतर्कता पूर्वक अनुमान गर्छन्। यो अनुमान गरिएको छ कि शताब्दीको अन्तसम्ममा 60० देखि 90 ० सेन्टिमिटर वृद्धिको आशा छ।
समुद्री सतह वृद्धि प्रमाण
ग्रीनल्याण्ड र अन्टार्कटिकाको पग्लने समुद्री सतहको वृद्धिलाई गति दिइरहेको छ भन्ने प्रमाणहरू धेरै बाध्यकारी र स्पष्ट छन्। थप रूपमा, ग्रीनल्याण्डमा मात्र समुद्रको सतह सात मिटर बढाउन जमेको पानी हुन्छ, त्यसैले यी क्याप्सहरूको सम्पूर्ण पग्लिनको खतरा ठूलो छ। प्राय: वैज्ञानिकहरू जसले पग्लने र समुद्री सतहको सतह अध्ययन गर्दछन् भन्ने अनुमान गर्छन् कि शताब्दीको अन्तसम्ममा यो निश्चित रूपमा एक मिटर भन्दा बढि बढेको हुनेछ।
१ 1990 XNUMX ० को शुरुमा वृद्धिको आधा वार्मिंगको कारण फैलाएर वर्णन गरिएको थियो, २०% पछि २०% पछिअन्वेषकहरूका अनुसार। ग्रीनल्यान्ड आज दुई दशक पहिले%% को बिरूद्ध २ two% संग यो बृद्धि गर्न योगदान गर्दछ। यो अध्ययनले समुद्री सतह नाप्नका लागि दुई फरक विधिहरू प्राप्त गर्न पहिलो पटक सहयोग पुर्‍याएको छ।
समुद्री सतह बृद्धि मापनका लागि विधिहरू
समुद्री सतह नाप्ने पहिलो विधि भनेको तीन तत्वहरूको यस वृद्धिमा योगदानलाई जाँच गर्नु हो: ग्लोबल वार्मिंगको कारण समुद्रको फैलावट, जमिनमा भण्डार गरिएको पानीको मात्रामा परिवर्तन र हिमनदी र ग्रीनल्यान्ड र अन्टार्कटिकामा बरफ टोपीबाट पग्लन्छ।
अर्कोतर्फ, दोस्रो विधिले उपग्रह अल्टिमेट्री प्रयोग गर्दछ। यो उपग्रह र समुद्र सतह बीच दूरी मापन गर्दै छ। यस तरिकाले, यदि दूरी कम भयो भने, यो यो हो कि समुद्री सतह बढेको छ। अहिले सम्म, उपग्रह अल्टिमेट्री द्वारा प्रदान गरिएको डेटाले पछिल्लो २० वर्षमा थोरै परिवर्तन देखायो।
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, समुद्री सतहको वृद्धिलाई गहिराइमा अध्ययन गर्नुपर्दछ किनकि त्यहाँ समुद्री किनार क्षेत्र र धेरै देशहरूको अर्थतन्त्रमा हुने थुप्रै प्रकोपहरू छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » समुद्री सतहको वृद्धि बढ्दो र अधिक गतिशील छ
असिना किन राती पस्दैन?
मे २०१ 2017 को महीना दोस्रो गर्मीको थियो किनकि त्यहाँ रेकर्डहरू छन्